Shiinaha oo $60 bilyan ku kordhiyey cashuurta badeecooyinka Maraykanka - Halbeeg News
Shiinaha oo $60 bilyan ku kordhiyey cashuurta badeecooyinka Maraykanka
BEIJING (HALBEEG) – Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay cashuur gaareysa $60 bilyan ku kordhin doonto badeecadaha laga soo waarido dalka Maraykanka.
Tallaabadan ayaa jawaab u ah hadal uu dhowr maalmood kahor sheegay Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump, kaasoo ahaa in 10% lagu siyaadin doono cashuurta Maraykanku ka qaado badeecooyinka ka yimaada dalka Shiinaha, lacagtaas siyaadada ah oo marka laysku daro wadarteedu noqonayso $200 bilyan.
Wasiirka Maaliyadda Shiinaha ayaa sheegay in BEIJING ku khasban tahay inay tallaabo qaado iyadoo si lamid ah uga jawaab celinaysa cashuuraha dheeriga ah ee Maraykanku kusoo rogay badeecadaha Shiinaha.
Qorshaha cashuur kordhinta ee Dowladda Shiinuhu iclaamisay oo noqon doona inta u dhexeysa 5-10$, wuxuu si rasmi ah u dhaqan geli doonaa Isniinta soo socota ee bisha September ku aaddan tahay 24-ka.
Arrintan ayaa si gaar ah saameyn ugu yeelan doonta 5,200 oo kamid ah alaabooyinka laga soo waarido dhanka Maraykanka.
Maraykaka ayaa sannadkii lasoo dhaafay ee 2017 wuxuu dalka Shiinaha kasoo dhoofsaday badeecooyin qiimahoodu gaarayo $500 bilyan, halka qiimaha badeecooyinka Maraykanku dhinaca Shiinaha u diray gaarayaan $130 bilyan.
YEMEN: Ubad milyan kor u dhaafaya oo halis ugu jira macaluul
Madaxwaynaha Somaliland oo la kulmay iskaashatada warshadlayda